Cabdi raxmaan Cirro oo aqbalay natiijada doorashada Somaliland... ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Cabdi raxmaan Cirro oo aqbalay natiijada doorashada Somaliland…
Cabdi raxmaan Cirro oo aqbalay natiijada doorashada Somaliland…
C/raxmaan Maxamed C/laaahi (C/raxmaan Cirro), Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Waddani, ayaa caawa ku dhawaaqay in uu tanaasulay, isla-markaana uu aqbalay natiijada doorashadaa.
Guddiga Doorashada Somaliland, ayaa waxay galabta ku dhawaaqeen in Muuse Biixi Cabdi loo doortay Madaxweynaha Somaliland, shanta sano ee soo socota.
Sida ay ku dhawaaqeen Guddiga Doorashada Somaliland, Hogaamiyaha Xisbiga Kulmiye, Muuse Biixi Cabdi codadkii uu helay waxay u dhigantaa boqoleyda 55.19%, iyadoo Hogaamiyaha Waddani uu helay 40.73%, halka Hogaamiyaha Xisbiga UCID, Faysal Cali Waraabe uu helay 4.17%.
C/raxmaan Maxamed C/laahi oo saluugay qaabka ay doorashada u dhacday, ayaa ugu dambeen caawa ka dhawaaajiyay in uu tanaasulay, isla-mamrkaaana uu aqbalay natiijada doorashada.
C/raxmaan Cirro oo la hadlay Warbaahinta, ayaa sheegay in dantiisa uu ka hormariyay midda Somaliland, isagoo intaa ku daray in tiisa uu ka hormarinayo midda qarankiisa, sida uu yiri.
Ka dib markii galabta lagu dhawaaqay in doorashada uu ku guuleystay Muuse Biixi, ayay Masuuliyiinta Xisbiga Waddani kulan gaar ah ku yeesheen Magaalada Hargeysa, afar saacadood ka dibna waxaa Warbaahinta la hadlay C/raxmaan Cirro, oo markii dambe ku dhawaaqay in uu aqbalay natiijada doorashada.
Faysal Cali Waraabe, Hogaamiyaha Xisbiga UCID, ayaa u hambalyeeyay Madaxweynaha cusub ee Somaliland, inkastoo uu saluug ka muujiyay codadka yar ee doorashada uu ka helay Xisbigiisa.
Previous articleErgadii dhaqanka Soomaaliyeed oo soo dhaweeyay in dib-u-eegista lugu sameyo Dastuurka…
Next article7-Sano jir Wadnaha ka xanuunsan oo Caawimaad ka helay Gudoomiye Taabid…
Mahdi Max’ed oo Sacuudiga kula kulmay ku-xigeenka bankiga hormarinta Islaamka (Sawirro)
Madaxweynaha Somaliland oo u safray magaalada Addis Ababa
Maxamed Mursal oo maanta lagu dilay magaalada Muqdisho
Lamaane isku dhex feeray garoon ay caruutoodu ku tartamayeen (Video)
Daawo war-saxaafadeedka ay DF ka soo saaratay go’aankii Kenya
Daawo:- Xayawaan qarni kadib, dib loogu arkay Kenya
Daawo:- Camera-man u shaqeeya BBC oo weeraray Trump
Daawo:- Maxaabiis qaab farsameysan uga baxsaday Xabsi
Video:- masxbuus faragashtay shaqaalaha xabsiga oo wacdaro ku dhacday
Video: Caruurta ku nool England oo la barayo waxyaabaha Galmada la...
Daawo:- Maxa kala qabsaday Abeeso nool & Mid caag ka sameysan!!
Daawo waxa qabsaday injineerkan farsamada ku guda jiray!!!
Daawo:- tuug xadi rebay silsilad dahab ah oo ay tii dheereed...
Daawo:- Haweeneydaan Nasiib lee la mari hayaa!!!
Daawo: Eygan cayaal suuqa ah & ninkan maxa kala qabsaday!?
Askari laaluush ka qaadanayay shacabka oo xabsiga la dhigay (Daawo)
Daawo: Fuusto shidaal ka dhamaday ayuu la agtagay dab!! (maxa qabsaday?)
Daawo Dukaanlahaan waxa ka qabsaday albaabkiisa!!! (Naxdin)
Daawo qaabkii ay Al-Shabaab u fuliyeen weerarkii Hotel Dusit ee Nairobi
Isnaadamis waa cudur kudhaco maqaarka kaasoobadalo muuqaalka jirka wuxuu kubadanyahy bulshada isnadaamiska wuxuu sababaa cun cun badan muhiih ahaan caloosha xubinta taranka baabbacooyinka gacmaha iyo...
Maxaa keena Muruq-boodka dhabarka? & Sideen ula tacalaa?
Faa’idooyinka Karootada & Waxyaabaha ay kaa caawin karto (Akhriso sirta ku...